Ahitana taratra fa latsaka lalina ny takaitran’ny fanjanahana - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Faha 150 taona nidiran’ny finoana katolika tao Fianarantsoa il y a 5 jours
Les Sakalava et Antandroy au bord d’un rude conflit communautaire à Tsaramandroso il y a 5 jours
Ahitana taratra fa latsaka lalina ny takaitran’ny fanjanahana
Tafatafa fohy nifanao nifanaovana tamin’i Lanto Ratsida mpampiantra no aroso amintsika. Izy dia olona akaiky ny tanora, miasa ho an’ny tanora : izay no hamintinana ny làlana nosafidiany eo amin’ny fiainana sy ny asa. Mpandalina ny fiaraha-monina ny tenany (sociologue). Niompana amin’ny teny malagasy ny tafatafa.
Efa lasa ny fankalazana ny 1 volan'ny Teny Malagasy, betsaka ireo tsy mahafehy azy ny Malagasy. Mitombina ve izany? Roso ny resadresaka.
Ny fahitanao izany eo amin’ny fiainam-pirenena? Ny mahatonga izany?
Latsaka lalina ny takaitran’ny fanjanahana. Ny fanabeazana, ny rafitra ekonomika, ny kolontsaina sns dia mibaboka eo anoloan’ny vahiny. Ny fiteny no isan’ny taratr’izany faharesena sy fahatsapan-tena ho ambany izany.
Ny vahaolana azonao omena hanarenana izany?
Mila politika koltoraly sy ara-panabeazana ary teknolojika manome lanja ny hasina malagasy isika, tsy ny fiteny ihany. Efa tsara ny fisian’ ireo fikambanana (mpikabary, mpandala ny maha malagasy sns, ivon-toerana (oniversite) ary koa ny ataon’ny orinasa sy mpiantsehatra sasany (Orange, Facebook, Fiadidiana ny Repoblika...）izay manisy fiteny malagasy amin’ny vokatra arosony, saingy mila fototra ara-materialy toy ny ara-teknolojia, ara-teknika, ara- stratejika manaraka azy. Ny tanjaky ny fiteny dia vokatry ny fitambaran-javatra maro maha izy azy ilay firenena.
Tafatafan-dRatalata : Feno kapoaka - il y a 8 heures
Tafatafan-dRatalata : Famangiana hafakely... - il y a 7 jours
Le livre Diary Nofy : Après la version papier voici la version audio du livre - il y a 1 moi